watchOS 4.1 beta inounza yakawanda nhau, tinovaratidza iwe | IPhone nhau
watchOS ndiyo sisitimu inoshanda iyo inopa simba iyo inodiwa smart wachi yevashandisi vazhinji kutenderera pasirese. Mune ino kesi masvondo mashoma apfuura vhezheni yake 4.0 yakauya pachena nechinangwa chekusimudzira kubatana kwayo kweIOS 11 uye ichiita kuti inyatsobatsira. Asi muhondo yayo yeBetas yasvika nhasi Apple haina kuda kukanganwa wachi yayo, uye zvave zvakadaro.
Zvikuru zvekuti watchOS 4.1 inosvika iine huwandu hwakanaka hwenhau dzinonakidza dzinozoita kuti iwe ufunge kuzviisa nekukurumidza, kunyange hazvo sezvatinogara tichikuyeuchidza kuti watchOS betas haina kudzoka shure uye kusagadzikana kuchave kuripo.
Kutanga iyi beta yekutanga inosanganisira yakazara yakazara yekushambadzira sisitimu yeApple Music, chimwe chinhu chavainge vatoona mavhiki mashoma apfuura uye kuti vazhinji vashandisi vari kuzogamuchira nemaoko maviri. Kune rimwe divi, iwe wagamuchirawo nyowani Radio kunyorera zvakananga pawatch, zvisinei, isu tinofanirwa kutakura mupfungwa kuti Apple Watch (kana iyo iPhone) ine Hardware inodiwa kushandisa iyo FM radio, saka isu tinofungidzira kuti ichave yakanangana nharembozha yekubatanidza.
Izvi zvinorevei? Kutanga, tichakwanisa kuwana chero rwiyo rweApple Music kubva pawachi yedu uye pasina kukosha kwekuwana iyo iPhone, chimwe chinhu chakakurudzirwa zvakanyanya tichifunga kuti vhezheni yeLTE yatangwa uye kunyanya kune vanoda zvemitambo (kushandisa mukana weApple Music offline chinhu chinenge chakakodzera.) Kune rimwe divi, iro redhiyo kunyorera kuchabatana neBeats 1 Live uye nhepfenyuro dzeRadio dzakapihwa muApple Music, saka kanganwa nezve kubatana neketani yeSER. Nhau dzinonakidza dzinoita iyi beta kuvandudza mashandiro kuApple Watch yedu nenzira inozivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4.1 beta inounza yakawanda nhau, tinovaratidza iwe
Asi ... zvinoitwa here? Iwe wakati "yakanaka AMOUNT yenhau" uye wakangotaura 2, izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kune vamwe vanhu, asi huwandu hwacho hauna kunyanya kukura.